Rita, Writing for My Sake!: 2008
Gtalk မှ အလကားရသော ဗေဒင်ဆရာ တိုတိုလင်းဝက် ၏ အခါတော်ပေး အရ ...
Singapore စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ တိတိတွင် Bishan Bus Interchange အနီးရှိ ထီဆိုင်၌ အင်္ဂါသမီး သူငယ်ချင်းနှင့် တူတူ ယနေ့ သွားရောက် ကံစမ်းပါသည်။
(မကြိုက်ရင် ပြီးမှ ပြန်ဖျက်ပေးမယ်)
Posted by Rita at 11/30/2008 08:14:00 PM0comments Links to this post
Labels: Making Joke, Singapore, This and That
ဒီတစ်ခါလည်း တင်ပြန်ပြီ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ email...
ဒီ Blog ကိုတောင် သူ့နာမည် ပြောင်းပေးဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ :)
[အမှန်တော့ အဲဒီ စာသားတွေ ဖတ်ချင်ဘူး.. ကျောင်းတုန်းက စာတွေလိုပဲ.. :( ]
(မိုက်တယ်နော် idea လေးက...)
(အိုး အိုး အိုး)
(နောက်ရာစုတွေကျရင်လည်း ရှေးတုန်းကလူတွေ သွားလေရာ laptop ကြီးတွေ ဆွဲလို့ ဆိုတာ ရီစရာဖြစ်သွားမှာပဲ)
(ခုနေ ကြည့်တော့ ဟားဟားဟား ပေါ့... သူ့ခေတ်တုန်းကတော့ သူလဲ Super ပါပဲ)
(တော်တဲ့လူတွေများ ငယ်ငယ်တည်းက မျက်မှန်တပ်တယ် ထင်တယ်)
Electronics နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲဟာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်သတဲ့။
Electronics နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တဆစ်ချိုး ဖြစ်တယ်တဲ့။
Civil Civil ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်မှာ... ကျွန်မကို Electronic Major ရောက်အောင် တွန်းပို့လိုက်တဲ့ တစ်ခွန်းတည်းသော စကား။
အဲဒီ စကားပြောပေးခဲ့တဲ့ လူကို ဒီနေရာကနေ Credit ပေးပါတယ် :)
ကျောင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ Electronic Field ထဲ လုံးလုံး မ၀င်ခဲ့လည်း Electronics သင်ခဲ့ရတာကို ကျေနပ်ပါတယ်။
အော် မတူတဲ့ subject တစ်ခုကို လေ့လာဖြစ် လေ့လာဖူးခဲ့တယ် ဆိုပြီးတော့လေ
ကျန်တာတွေက လုပ်ရင်းသင်သွားလို့ ရတာကိုး
Electronics ကတော့ ကျောင်းတုန်းကသာ မသင်ဖြစ်ခဲ့ရင် နောက် ဘယ်တော့မှ လှည့်ကြည့်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့ ဘာသာရပ်ပဲ။
အင် ဘာတွေ ရေးမိပါလိမ့်
Posted by Rita at 11/29/2008 09:59:00 PM 1 comments Links to this post
Posted by Rita at 11/28/2008 10:41:00 PM0comments Links to this post
Posted by Rita at 11/23/2008 09:59:00 PM0comments Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က "အရှေ့ကမ်းခြေ" ကို ဒုတိယ အကြိမ် ရောက်ခဲ့တယ်။
အချိန်မရွေး မော့ ကြည့်လိုက် .. တစ်စီးမဟုတ် တစ်စီးပျံတယ်
သူတို့ ရဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံ
မစု နှင့် ကလေးတစ်သိုက် (Note: Not her own :P)
သုံး နဲ့ လေး
ကမ်းခြေမှာ တွေ့တဲ့ ကလေးလေး
ဘာရယ်မဟုတ် တငုတ်တုတ်နဲ့ ...
(မင်းထင် ကိုကိုကြီးရဲ့ ကဗျာ တပိုင်းတစ ပေါ့.. ကဗျာ နာမည်က "စင်အောက်က လု" တဲ့)
Posted by Rita at 11/21/2008 10:58:00 PM0comments Links to this post
ရေးစရာတွေ ရှိပေမယ့် ရေးဖို့ အချိန်မရတာနဲ့ အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက် လိုက်တာ...:)
(မနေ့က Print ထုတ်တာရပ်ကြည့်ရင်း စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံ... ထောင့်စွန်းနားလေးက အဖြူရောင် အ၀ိုက်က A-1 sheet ထုတ်တဲ့ Printer)
(ဒါကတော့ Queen! :P)
Posted by Rita at 11/12/2008 09:36:00 PM0comments Links to this post